Ukungenami ngama-student card e-Unisa | IOL Isolezwe
Ukungenami ngama-student card e-Unisa
Isolezwe / 26 February 2013, 10:45am / MHLENGI SHANGASE
Banqatshelwe amakhadi okungena esikoleni
BAKHALA ngokungahleleki kwezinto abafundi abahlala kude neTheku abafunda e-Unisa okudingeka behle benyuka bezofuna amakhadi, abanye abagcina ngokuphindela emuva belambatha ngenxa yokugcwala.
Laba bafundi bathi ngabe kungcono ukuthi lolu hlelo alwenziwa kuphela eThekwini njengoba ekhona amahhovisi kwezinye izindawo kodwa awawenzi la makhadi.
Omunye wabafundi osuka eShowe, uNksz Nokulunga Dube osebenza enkantolo yakule ndawo, uthe usegqigqe izikhawu ezintathu ezama ukwenza ikhadi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
Ukhala ngokuthi uhlezi ecela ukusheshe aphume emsebenzini ukuze azolungisa le nkinga yaleli khadi ukuze akwazi ukusebenzisa umtapo wolwazi eRichards Bay.
“Okokuqala ngafika ngiwunamba 197 kodwa ngangakwazi ukungena ngoba kwase kuvalwa. Okwesibili ngasheshe ngasuka ngafika kwathiwa sekuyavalwa futhi kodwa ngokwamahora abhaliwe kuthiwa kuvalwa ngo-4 kodwa kwakuwu-3 kuvalwa,” kulandisa uNksz Dube.
Okwesithathu uthe yilapho emane alahla khona ithemba ngoba kuvalwe besami kulayini wathi noma esezikhalela ukuthi usuka kude kwamane kwafana nokuthela amanzi emhlane wedada.
Udadewabo, uNksz Sijabulile Dube, osuka eFilidi owenza iziqu zokufundisa uthe naye usegqigqe kathathu kodwa lutho ukusizakala.
“NgoMashi 1 kumele sibe sesinawo amakhadi ngoba kuyavalwa kodwa uma kwenzeka kanje kuyacaca ukuthi ngeke siwathole. Angisazi manje ukuthi ngizokwenzenjani ngoba ngisuka kude angikwazi ukwehla ngenyuka ngize eThekwini ngizokwenza ikhadi,” usho kanje.
Obhekele ezokuxhumana nokwazisa kulesi sikhungo, uNksz Gcina Nhleko, uthe abafundi baye babuzwe ukuthi baqhamuka kuphi futhi bayakhuthazwa labo abahlala kude ukuthi baziveze ukuze basizakale.
Uthe abahlala ezindaweni ezingaphandle njengasePort Shepstone bathathwa izithombe bese amakhadi abo ashiywe ophikweni lwabo oluseWild Coast.
“Zikhona izikhalo esizitholayo abafundi bengacaciselekile ngokusebenza kohlelo nokuthi okwamanje lusenziwa eThekwini kuphela. Kodwa siyaqonda ukuthi i-student card senza impilo yomfundi ibe lula futhi asheshe abonakale yingakho bezama ukusheshisa,” usho kanje.
Uthe ngemuva kukaMeyi 2013, uhlelo luzosabalala naseMgungundlovu ngoba indawo kuzobe sekungeyabo.
“Samukela-200 ngosuku ngenxa yokuthi uyedwa owenza amakhadi, unomsizi oyedwa. Asikwazi futhi ukusebenzisa ukuthi umuntu usuka kuphi ngoba kukhona abavuka ngovivi esingeke sibenze ubulungiswa kubona uma sithatha abakude kuqala kodwa siyabagqugquzela ukuthi bafike kusekahle ngoba kuyagcwala.”
Unxuse abafundi ukuba behlise umoya njengoba ifilimu eyenza amakhadi ivela ekomkhulu ePitoli ngakho kwesinye isikhathi iyaphela kodwa abathathwe izithombe bese belanda amakhadi ngosuku olunqunyiwe noma basho ihhovisi le-Unisa eliseduze nabo.